Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Tanzania Travel and News momba ny fizahan-tany » Tanzania dia namoaka ny foibem-panangonana COVID-19 tao amin'ny Serengeti National Park
Ny fizahan-tany momba ny fiainana an-tany any Tanzania dia mahasarika mpizahatany 1.5 tapitrisa isan-taona, mitentina eo amin'ny $ 2.5 miliara ao amin'ny firenena, mametraka azy io ho mpamatsy vola vahiny voalohany.
Mba hanamorana ny mpizahatany tonga ao amin'ny Serengeti National Park handray ny fifindra-monina wildebeest isan-taona dia natsangana ny foibe fanangonana COVID-19.
Ny fitsapana dia hiaro sy hanome toky ireo mpizaha tany ny fitsaboana azy ireo mandritra ity areti-mandringana ity.
Ny foibe no fandraisana andraikitra farany farany taorian'ny nataon'ny hafa toy ny fametrahana fiaramanidina mpitondra fiaramanidina manara-penitra amin'ny valan-javaboary manan-danja.
Tanzania dia nanakodia ny foibem-panangonana santionan'ny Coronavirus ao amin'ny Serengeti National Park mba hanamorana ny fitsapana COVID-19 ho mora sy mora amin'ny mpizahatany.
Ny sanganasan'ny Fikambanan'ny Tour Operations (TATO) ao Tanzania izay niara-niasa tamin'ny governemanta, ny fampidirana ny foibe fanangonana santionany COVID-19 ao amin'ny Serengeti National Park dia isan'ny tady fepetra maika noraisina tato ho ato mba hanomezana toky ireo mpizahatany ny fikarakarany fahasalamana amin'ny maha-ampahany azy. ny drafitra lehibe hanohanana ny fiverenan'ny indostria.
Ny foibe fanangonana santionany COVID-19 an'ny Seronera (fonenana ao amin'ny valan-javaboary), ny karazany voalohany, dia miorina ao afovoan'i Serengeti ary hanamora kokoa ny fizahan-tany ho an'ireo mpizahatany mirohondrohona mankao amin'ny valan-javaboary tanzania voalohany hankafizany an'izao tontolo izao fifindra-monina wildebeest isan-taona endrika.
Nanomboka ny asa tamin'ny 13 febroary 2021, tao amin'ny foibe fanangonana santionany Seronera COVID-19, ka nahatonga ny mpizahatany mila fitiliana rehefa mankafy ny fialantsasatra sahaza azy ireo ao amin'ny valan-javaboary sy ireo hafa mandrafitra ny faritra fizahantany avaratra.
"Ity dia fijoroana ho vavolombelona mazava ny amin'ny maha-zava-dehibe ny singa fifangaroan'ny varotra manan-danja ao amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny, dia ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa amin'ny fanompoana ireo mpizahatany mba hahamora sy mora ny fitsapana", hoy ny sekretera maharitra ny harena voajanahary sy fizahan-tany, Dr. Aloyce Nzuki.
"Taorian'ny fanandramana nandritra ny volana maro, asa mafy, ary famatsiam-bola manokana, ny foibe fanangonana santionany Seronera COVID-19, izay voalohany amin'ny karazany any an'efitra, dia vonona hohanin'ny mpizahatany ankehitriny," hoy ny Tale jeneralin'ny TATO, Andriamatoa Sirili Akko. .
Andriamatoa Akko, tale jeneralin'ny fikambanana miaraka amina mpandraharaha mpizaha tany miisa 300 miampy, dia nilaza fa tamim-pireharehana ity vatana ity handray anjara amin'ny famahana ny areti-mandringana. "Ny mpanamory ny tetika dia mihazakazaka miaraka amin'ireo mason-tsivana fiarovana mafy ananantsika," hoy ny fanazavany, "ary manohy mitazona ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fiambenana mba hampijanona ny viriosy sy hanampy amin'ny fisorohana ny fifindrany eto amin'ny firenentsika. mifanaraka amin'ny torolàlana an'ny Minisiteran'ny Fahasalamana. ”
Ny fepetra toy ny fitiliana ny mari-pana amin'ny hafanana, ny fitondram-panjakana fanadiovana ary ny fidiovana, ny fitaovam-piarovana fanampiny (PPE), ary ny halaviran'ny fiaraha-monina dia miorina arak'ireo paikady nomen'ny governemanta.
“Mino izahay fa ho fanamaivanana lehibe io ny indostrian'ny fizahantany. Manana trosa sy feno fankasitrahana tokoa izahay amin'ny Governemanta Tanzania tamin'ny nanatanterahana izany tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa telo tonta (TATO); Ministeran'ny harena voajanahary sy fizahantany; ary Ministeran'ny Fahasalamana, Fampandrosoana ny Vondrom-bahoaka, Miralenta, Zokiolona ary Ankizy, ”hoy Atoa Akko nanamarika.
Nanjary fandraisana andraikitra farany ity ivon-toerana ity aorian'ny sasany toa ny fametrahana fiaramanidina mpitondra fiaramanidina manara-penitra any amin'ny valan-javaboary efatra manankarena hamonjy ny ain'ny mpizahatany amin'ny tampon'ny fihenan'ny COVID-4.
Ny UNDP-Tanzania dia nanohana ny TATO ara-bola hanovana ny Toyota Landcruiser nomen'ny mpikambana ao aminy, Tanganyika Wilderness Camps, ho fiara mpamonjy voina manara-penitra. Ny vola ihany koa dia nividy ireo fitaovana ilaina amin'ny fiarovana manokana (PPE) tena ilaina amin'ny fiarovana ny mpizahatany sy ireo manompo azy ireo manoloana ny aretina COVID-19.
Ny fiara mpamonjy voina dia napetraka any amin'ny faritra mafana amin'ny fizahan-tany dia ny Serengeti National Park, ny faritra Conservation Ngorongoro, ny valan-javaboary Kilimanjaro, ary ny tontolo iainana Tarangire-Manyara. Ny tena tanjon'ny fanaparitahana ireo fiara mpamonjy voina dia ny hanomezana toky ireo mpizahatany fa vonona handray andraikitra haingana i Tanzania raha sendra vonjy maika ary ao anatin'ny drafitra nasionaly hametrahana kidoro fandraisana an'ireo mpanao fialantsasatra.
Christine Musisi, solontenan'ny UNDP Tanzania Resident, dia nilaza fa, "Cognizant of the tourism industry as a accelerator of sustainable development with the potensial to mandray anjara amin'ny tanjona maharitra amin'ny fampandrosoana maharitra (SDGs) noho ny fihenan'ny vokariny sy ny vokany mihatra amin'ny sehatra sy indostria hafa, izahay dia maniry ny hanohy hanohana ny governemanta amin'ny famolavolana drafi-panarenana feno ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany, na any amin'ny tanibe Tanzania na i Zanzibar. ”
Ny fidiram-bola vahiny avy amin'ny fizahan-tany any Tanzania dia nidina ambany ambany 10 taona nandritra ny taona nifarana tamin'ny Oktobra 2020 noho ny fameperana fitsangatsanganana napetraky ny firenena maro manerantany ho valin'ny aretin'ny COVID-19. Ny tarehimarika Bank of Tanzania (BoT) dia mampiseho fa ny vola azon'i Tanzania tamin'ny fizahan-tany tamin'ny vanim-potoana nodinihina dia nidina mihoatra ny 50 isan-jato hatramin'ny $ 1.2 miliara raha mitaha amin'ny $ 2.5 miliara azo tamin'ny vanim-potoana nitovy tamin'ny taona 2019. Ny vola dia voarakitra farany tamin'ny volana oktobra 2010 rehefa nahazo ny firenena 1.23 miliara dolara avy amin'ny indostrian'ny fizahantany.
Ny fizahan-tany any Wildlife Tanzania dia mitombo hatrany miaraka amin'ireo mpizahatany efa ho 1.5 tapitrisa mitsidika ny firenena isan-taona, mahazo $ 2.5 miliara ny firenena - mitovy amin'ny 17.6 isan-jaton'ny harin-karena faobe - mampiorina ny toerany amin'ny fahazoana vola vahiny voalohany ao amin'ny firenena. Ankoatr'izay, ny fizahantany dia manome asa mivantana 600,000 ho an'ireo tanzaniana ary iray tapitrisa mahery hafa mahazo karama amin'ny indostria.
Rehefa manomboka sitrana ireo firenena ary miverina amin'ny toerana maro ankehitriny ny fizahan-tany, dia nanokatra ny habakabaky ny sidina iraisan'ny mpandeha iraisam-pirenena ny manampahefana tanzanianina nanomboka ny 1 Jona 2020, ary lasa firenena voalohany ao amin'ny faritra Afrika Atsinanana izay miarahaba ireo mpizahatany mitsidika sy mankafy ireo manintona azy.
 Ny toeram-pialan-tsasatra ekosey lehibe manendry General Manager vaovao